19 April 13- Twi Online
Friday Sermon: True Attributes of Muslims and their Responsibilities - 19th April 2013 - Ashanti Twi Translation.
ALLAH, ƆDOMFOƆ, MMƆBORƆ HUNUFOƆ NO DIN MU
ƐFIADA NYAMESƐM: Oforesuo Bosome da a ɛtͻ so 19, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon – 19th April2013 – Ashanti Twi Translation)
MUSLIMFOƆ NOKORƐ ABƆDIN NE WƆN ASƐDEƐ.
“O! mo nkurͻfoͻ a moagye adie! Monsuro Allah sɛdeɛ ɛfata sɛwͻsuro No; na momma owuo mmɛto mo gyesɛ aberɛ a mo wͻ ahobraseɛ gyinabrɛ mu” (3:103).
Saa Kur’aan kyɛfa yi kyerɛkyerɛ tebea a ogyidini mapa wͻ mu. Ogyidini a, ͻyɛ Nyamesuro asɛdeɛ, saa ahiadeɛ yi tͻfa a Kur’aan no akae yɛn fa yɛn asɛdeɛ a yɛwͻ ma Nyame ne nnipa biara. Sɛ yɛbɛbͻ mmͻden na y’adi Nyame mmra so. Sɛ yɛbɛgye Nyankopͻn ne N’akͻmhyɛfoͻ nyinaa kͻmhyɛ adi na yɛbɛbͻ mmͻden de ayͻ adwuma.Ɛnnwie pɛyͻ sɛ obi bɛfrɛ ne ho ogyidini wͻ aberɛ a ͻbɛfrɛ ne ho Muslimni. Ɛyɛkwannidisoͻ a yɛfa so de di Nyame mmra so ne Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) suban pa akyi. Obi a ͻdi saa nhyehyeɛ wei nyinaa so no bɛtumi afrɛ ne ho ogyidini mapa.
Nkurͻfoͻ ana wͻwͻ som a ɛdi nkan baeɛ no yɛɛ asoͻdenfoͻ wͻ berɛ a wͻn anni mmra a yɛde maa wͻn no so,na sɛ yɛn nso annsuro Nyame na y’annyɛ Nyame asɛdeɛ ne yɛn asodie a yɛde yɛn ho bɛhyɛ asotweɛ ase na Owuo abɛfa yɛn wͻ tebea a yɛn annyɛ adepa. Ɛwͻ sɛ, ogyidini mapa biara suro Nyame na ͻhwɛ deɛ ɛbɛtumi ama no de anideɛ ama Nyame. Wei mpo no, sɛ ogyidini mapa bɛhwere ewiase mu agyapadeɛ mpo a, mma no nnha no. Awofoͻ, namfoͻ, abusua, somm no mu nimdeɛfoͻ anaa kandifoͻ a aka no, nni ho kwan sɛ obi bɛsi obi kwan sɛ ͻmma no nni Nyame mmra so. Obiara bɛbu ne ho atɛn wͻ Nyankopͻn anim. Nnyɛ Abusuakuo anaa namfo kann anaa wͻn a wͻfrɛ wͻn ho sunsum mu kandi foͻ no na wͻbɛtumi asoa obi adesoa anaa amanehunu.
Islam nokware ne sɛ, yɛbɛda Nyankopͻn nsɛnkyerɛne adi, na yɛagye Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) nkyerɛkyerɛ pa no ato mu, sɛ yɛbɛbͻ yɛn ho ban mma nhyɛsoͻ anaa ͻhaw biara mmɛda so na y’ayɛ Islam no wͻ berɛ a yɛte aseɛ wͻ honhom mu.Nyankopͻn aka sɛ, wͻn a wͻnni Nyamesuro no, Nyankopͻn nngye wͻn mpaeɛ ne wͻn afͻrebͻ nto mu. Ɛno bɛyɛbea a wͻn sɛeɛ firi ba. Wͻ berɛ a Nyame bɛyɛ atanfo no tanfo na Ɔsan bɛyɛ ayͻnkofoͻ no yͻnkoͻ wͻ wͻn a wͻde Nyankopͻn mmra no yͻ adwuma na wͻyɛ biribiara sɛ ɛbɛsͻ Nyame ani. Deɛ wͻyɛ deɛNyame ani bɛsͻno, Ɔhyira so ma wͻn. Muslimfoͻ a wͻda wͻnho so sɛ berɛ biara aowuo bɛfa wͻn no na wͻn yɛ Muslimfoͻ, wͻn na wͻn tiri ayɛ yie.
Wͻ berɛ a y’atumi agye Ɔnokwarefoͻ ne ahobrasefoͻ ma Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) adi no, ɛwͻ sɛ Ahmadiyyafoͻ nso bͻ mmͻden yɛ deɛ ɛbɛma Nyame ani asͻ na wͻsan bͻ kuro no ho ban. Wei ne asodie kɛseɛ a ɛda yɛn so na yɛnbͻ mmͻden sɛ yɛde bɛyɛ adwuma. Hadhrat Khalifatul Masih aka sɛ, sɛdeɛ ne nkasaeɛ ho hia no, deɛ ͻkasa fa ho biara no kͻ ma Muslimfoͻ dodoͻ no nyinaa, ɛno nti na ͻbͻͻ Muslimfoͻ kandifoͻ/nimdeɛfoͻ no neyɛɛ anaa suban kane no. Muslimfoͻ dodoͻ no a na wͻhwɛ MTA wͻ berɛ a wͻtie Jama’at Ahmnadiyya no nkyerɛkyerɛ pa no. Hadhrat Khalifatul Masih nsa aka nkrataa firi nnipa kuo a wͻnni Jama’at no ho nimdeɛ. Krataa no baako ka sɛ, berɛ a ͻtie Hadhrat Khalifatul Masih kasana ͻhwɛ tebea a awiaseno nyinaa wͻ mu no, na saa nnipa no gyedi sɛ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yɛ ͻnokwarefo.
Ɔmaa yɛn tirinkwa ne di yie,na mmom ͻkaa sɛ, ͻnni tumi ne ahoͻden a ͻne Jama’at no bɛdi nkitaho na Maulwisno ahunu. Wei ho nti, yɛhunu no sɛ ͻyɛ ahufoͻ nanso ɛnti ͻnntumi mmɛka Jama’at no ho. Obi a ͻnyɛ Ahmadiyyani nso kaa sɛ, ɛwͻ sɛ yɛsuro Nyankopͻn asotwe sɛ ɛkͻba sɛ Jama’at yi yɛ nokware ampara a. Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ saa nkurͻfoͻ yi nkae sɛ Nyankopͻn hyɛ yɛn sɛ yɛn suro No.Ahmadiyya Jama’at no yɛ nokware somm, n’adansedie a yɛhunu no wͻ mfie ‘124’ no so. Deɛ ɛteɛ ne sɛ Aban ahodoͻ nhyehyɛeɛ a wͻde agu kwan so a wͻde yɛ fa amanehunu mu no. Wͻn a wͻfrɛ wͻn ho Maulwi akͻhwifoͻ no a, wͻn di kuo anim ma wͻn yɛ bͻne no. Sɛe, san kum yɛn, san hyehye Ahmadiyyafoͻ fie, san yi wͻn adi firi wͻn nwuma mu, san si mmͻfra no ano kwan wͻ wͻn adesua mu. Nnyɛ sɛ Ahmadiyyafoͻ gyidie si pi nko,na mmom wͻn ayɛ krado wͻ afͻrebͻ kɛseɛ biara. Wei ne adanseɛ a ɛsombo wͻ Ahmadiyya nokware no ho. Yɛyi wei firi hͻ a, Jama’at no retu mpͻn firi sɛ Nyankopͻn yɛ “Ahobanbͻni kan na Ɔsan yɛ Ɔboafoͻ kan”.
Kuo a wͻn ate wͻ Islam din mu a wͻn dwumadie ne sɛ wͻ kobasabasa de awudie ba no (Jihad) nnyɛ hwee na mmom wͻde basabasayͻ ba Islam mu. Nyankopͻn aka sɛ Ɔde nkonim ma deɛ ͻreko na ͻbrɛ wͻ Nyame akwan so. Kwan biara so no, nkonim bɛn na awudifoͻ yi anya? Muslimfoͻ rekum wͻn nuanom Muslimfoͻ. Ɛnam wei so nti no, wͻn renya akodeɛ firi ebinom hͻ. Wͻ Syria man mu no, kuo ahodoͻ ko tia wͻnho na wͻsan de adesrɛdeɛ ama nkuro a wͻn nnyɛ Arabfoͻ no sɛ wͻn mmoa wͻn akodeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wͻde bɛtu aban afiri so.Muslim atuatefoͻ no ne Muslim aban no de akodeɛ yi reko tia wͻn ho. Wͻn nyinaa nni Nyamesuro. Wei ne nkurͻfoͻ a wͻn ayi wͻn ho afiri Nyamesom mu.
Na Emir Timur, Muslimfoͻ hene anaa kandini wͻ mfie 1336-1406 a ͻhyɛ aseɛ wͻ ahobraseɛ mu dii Ɔman kɛseɛ so. Ɔkaa sɛ dabiara ͻbɛhyɛ ntͻkwa anaasɛ akoo ase no, ͻhwɛ sɛ Muslimfoͻ ahenfo no de wͻn akyidifoͻ no asɛdeɛ ma wͻn anaa. Sɛ wͻn gyidie mu yɛ den anaa, sɛ ͻhunu sɛ saa tebea yi nte saa a, ͻka saa kyerɛ ahenfo yi na ͻsan yͻ nhyehyɛeɛ wͻ kuro no mu a ɛgyina Islam mmra so.Ɔkaa sɛ, ne nkonimdie no nyinaa no firi Nyankopͻn mmoa. Na Emir Timur nhyehyɛeɛ pii no gyina pɛpɛpɛyͻ ɛno nti na ͻdii nkonim no. Ɛwom sɛ ͻdii awu deɛ anaasɛ yɛhunu no sɛ na ͻno ne deɛ ͻdi mu sene ahenfo a na wͻwͻ n’aberɛ so no. Ɔregye ne mfomsoͻ ato mu no, ͻkaa sɛ, na n’ahenie no gyina pɛpɛpɛyͻ so. Nyansa ne ahokeka na afei ͻhwɛɛ ne manfoͻ ne nkurͻfoͻ a ͻdii wͻn so nkonim no na wei nyinaa yɛ ‘ͻha nkyekyɛmu du ne nkyekyɛmu nkono’ ne nkonimdie na ‘du nkyekyɛmu baako a ɛyɛ ne neyɛeɛ na ͻde sikan na ɛyͻ.
Ɛnnɛ yi ahenfo no dwene deɛ ɛyɛ anaa abɛboa wͻn nkoa ho na wͻsan dwene wͻn tumidie nkoa ho.Ɛsom no kandifoͻ no ko tumi ho na ebinom nso ate atuate kuo ɛna wͻreboa wͻn. Wͻtete mmͻfra no bi asraafoͻ nteteɛ wͻ adesua beaɛ (Madrassa) na afie wͻde wei nyinaa ako atia Muslimfoͻ. Muslimni rehwie ne nua Muslimni mogya regu.Islam yɛ ͻsom a ɛyɛ ͻdͻ ne asomdweɛ.Nkyerɛ aseɛ a ɛkyerɛ asomdweɛ ne ahobanbͻ a ɛyi ͻyaw firi nnipa so. Nnɛ yi, nnipa kuo yi de basabasayͻ aba ama no aba sɛ, sɛ basabasayͻ anaa awudie bi kͻ so a yɛde ani bu anaa yɛsusu sɛ Muslimfoͻ kuo a ɛwͻ awiase afaana nyinaaa na ɛyͻeɛ.topaeɛ a ɛtoo wͻ USA wͻ Boston ahenkuro mu no, akyire no akuo bi a wͻ ko tia Islam ne kankͻ ɛde baeɛ sɛ ɛyɛ Muslimfoͻ na ɛdii saa dwuma no. Wͻn ambͻ akuo biara din nanso wͻsusu no wͻ berɛ wͻwͻ nyinasoͻ sɛ ɛyɛ Muslimfoͻ bi na adi saa awurkasɛm yi. Yɛda Onyankopͻn asesɛ saa akuo wei apo sɛ wͻ ne suban bͻne biara nni akutahodie na saa kasapͻ wei bɛyɛ ama yɛn.
Na ɛnso wͻn nni Nyamesuro (Taqwa) biara. Wͻnom ɛkͻ so ka sɛ ɛwͻ mu sɛ wͻnom ɛne no nni nkutahodie biara, wͻnom gye to mu na wͻnom ɛtae akyire. Ɛdeɛ bɛn na wͻn nya sɛ wͻnom kͻ wͻn a wͻnntumi mmͻ wͻn ho ban nosoͻ? Na ɛwͻɛfa foforͻ mu no wͻn ɛka sɛ obiara nni hͻ a ͻdͻ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no sɛ deɛ wͻn yͻ no na ɛfa foforͻ no so no wͻn daa suban a ɛne ne suban a ɛdi mu no bͻ abira. Ampara sɛ, obi ma ɛma deɛ obi dͻ no ne so kakeraabi daa adi na Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no kyerɛ sɛ ɛmma yɛ mpira obi a ͻnnim biibi ho hwee, abͻfra, ɛmmaa ne ɛmpanimfoͻ ɛmpo wͻ ɛkoo mu na Kuran no nso ka sɛ yɛ mmͻ nkurͻfoͻ a wͻwͻ ɛsom foforͻ no mma ho ban. Wͻn ɛnkoara na wͻgye nkurͻfoͻ ɛnkwa wͻ aberɛ a ɛkoo nni hͻ na wͻn ma nnipa bebiree baabi twitwa. Koowaa krataa baako twerɛ sɛ, weinom nyinaa wͻ nsͻano baako pɛ sɛ ɛne wͻbɛkum Muslimfoͻ anaa Muslimfoͻ nyinaa. Ɛbinom kyerɛ saa adwene wei ɛfiri sɛ Muslimfoͻ ɛkyerɛ wͻn ɛkwan pa.
Wͻ Apueɛ ha, saa suban bͻne ɛsi animono so na n’akyi ɛwͻ sɛ obi tie na ͻtwe ne ho nanso wei ho anigyeɛ aterɛ ama Muslimfoͻ no aman no mu bɛyɛ nkyɛmu aduaso (70%) a ɛsi aberɛ biara. Sɛ ɛyɛ Pakistan, Afghanistan, Libya, Algeria, Sudan anaasɛ Somalia. Muslimfoͻ ɛrekum Muslimfoͻ baabiara na wͻyͻ no wͻ ɛsom edin mu. Sɛ wͻreyͻ bͻne a ɛnni kwan sɛ wͻyͻ no wͻ ɛsom ɛdin mu na saa nnipa akumkum akumkum yi ɛnni kwan sɛ wͻfrɛ no Jihad. Wͻ Muslimfoͻ aman a basabasayͻ nni hͻ no, pɛpɛɛpɛyͻ ɛnni hͻ koraa, ahiafoͻ no ɛrekͻso yɛ ahiafoͻ paa na asikafoͻ no ɛnso ɛreyͻ asikafoͻ paa.Wͻn a wͻnni animonyam, akunafoͻ ne wͻn a wͻn awofoͻ awu agya wͻn no, wͻaduane mienu wͻ Saudi Arabia a ɛyɛ ɛngo agyapadeɛ kɛseɛ. Sɛ wo hwɛ Islam din mu a yɛmma ͻbaa ho kwan sɛ wͻnyɛ adwuma nanso aban no nso nhwɛ wͻn sͻ wͻma wͻn biibi a ɛnso wͻn ne wͻn abusuafoͻ. Abrɛko a, ahemfo no ahenfie no, wͻn afapem wͻde sika kͻkͻͻ na ayɛ na ɛnso wͻn nkurͻfoͻ no ɛrebrɛ. Wͻyi wei nyinaa wͻ Television so.
Awerɛhosɛm bebiree no resi wͻ Muslimfoͻ no aman afoforͻ nso so a aban no nnyɛ pɛpɛɛpɛyͻ na wͻreda suban bͻne adi na ͻman mma no nso nnyɛ wͻn asɛdeɛ na sɛ wͻma wͻn kwan nso a wͻdaa suban bͻne adi. Wei nyinaa ɛtwe yɛn firi Nyame suro ho. Yɛka sɛ Islam nkyerɛkyerɛ no awie pɛyͻ, a ɛyɛ saa, na wͻn ɛti ka sɛ wͻn hia Ɔkͻmhyɛni, Messiah ne deɛ ͻde nsesaeɛ biara bɛba. Ampaara sɛ Onyankopͻn ne Ne Kͻmhyɛni (NNN) ahyɛ ho bͻ sɛ saa nnipa wei maeɛ no bɛba a wͻde sesa nnipa wͻ ewiase wei mu. Na ɛwiase no mu nnipa ɛsu ka sɛ Muslimfoͻ no ɛyera afiri wͻn nkyerɛkyerɛ ho. Asͻredan wͻ hͻ nanso wͻde ayɛ bea a wͻyͻ amanyͻsɛm. Ampaara sɛ Kur’aan Kronkron no wͻ hͻ nanso w’ayɛ no sɛ asiesiedeɛ na animdifoͻ no atwerɛ ne nkyerɛkyerɛmu a ɛbɛdi aboa wͻn na ɛde nnipa bebiree ɛrekͻ ɛkwan bͻne so. Ɛyɛ mfomsoͻ soͻ sɛ wͻbɛka sɛ ɛho nnhia sɛ obiara bɛba ɛfiri sɛ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no aka sɛ ɛho bɛhia.
Ɛho hia sε obi bεfiri Onyankopᴐn hᴐ aba na w’abε sesa nkrofoᴐ no na w’ayi adwene bᴐne a εwᴐ Islam ho na wᴐde εwiase nyinaa aba Ͻkᴐmhyεni Kronkron (NNN) no frankaa no ase.Abrε a Onyakopᴐn ne no Kᴐmhyεni (NNN) no afrε deε wᴐbεba no Ͻkᴐmhyɛni, hwan na ᴐwᴐ ho kwan sε wᴐkyerε mu na wᴐkum wᴐnom a wᴐdi no akyi no? Ɛwiase adi ho adanseε sε Εwᴐ mu sε Kur’aan Kronkron no w’abᴐ ho ban nanso sεdeε εsom no si teε paa nso honhom ne muslimfoᴐ no suban san εte hwe ase na yahwere Nyame suro. Muslimfoᴐ no bebiree εrebᴐ wᴐn bra a εnfa Onyankopᴐn εmmra ho. Ɛhia nipa wᴐ saa gyinabrε wei mu sε wᴐbε hunu Islam ho hia a εhia na wᴐbε ma no atrε wᴐ Muslimfoᴐ no mu, yεn Ahmadiyyafoᴐ ka sε saa nipa wei Onyankopᴐn na ᴐsomaa no wᴐ deε Ɔkᴐmhyεni kaaeε ho wᴐ mfie apem ne aduanan a atwam no. Wᴐ Onyankopᴐn no adom mu no, wᴐkyerε honhom mu agudeε a εyε ku’raan kronkron no ne nwoma mu na wᴐmaa papa ne bᴐne anaasε atorᴐsεm da adi pefee.Wᴐkyerεε sε Islam edi mu kyεn asom ahodoᴐ a εwᴐ εwiase nyinaa na wᴐne na’tamfo di apinisie.
Ͻnyini kyere yε na Onyankopᴐn boa no na ᴐkᴐᴐ ne kra akyi a ᴐgyaa yεn adeε a εbεtena hᴐ daa εne anaamusideε (khilafat) asaase ewie mu nkutahodie anya a εbε kᴐso aba atwa mu wᴐ atorenkyεm mu. Asaase woso, nsu yiri ateete a εwᴐ muslimfoᴐ so wᴐ εwiase yi mu no nnyε sε εbε bue Pakistanfoᴐ ani ne muslimfoᴐ nkaeε a aka no anaa? Asaase woso a esii nansa yi mu wᴐ aman ahodoᴐ pii so a Indonesia εka ho. Ɛho εhia sε yε bε dwene onyankopᴐn ahyεdeε ho a εbε ba mu, εho hia sε yε bε srε bᴐne fakyε (Istigfar) kyen sε yε bε sua wᴐnom wᴐseε sε wᴐyε εsom no animdefoᴐ no.Ɛwᴐ sε yε ma wᴐn hunu wᴐn atorᴐsεm.Wͻn bɛtumi ama yɛn mfatoho baako pɛ afiri Ɔkͻmhyɛni no suban mu a ɛne deɛ wͻn ɛkyerɛ no ɛnnɛ no yɛ pɛ? Ɛwͻ sɛ Muslimfoͻ no dwene wͻnom ewuo ho na wͻnom hwɛ wͻn asɛdeɛ wͻ Onyankopͻn ne onipa asɛdeɛ.
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no kasa faa wei ho: Anka me pɛ ne sɛ, sɛdeɛ Muslimfoͻ no dͻ saa ewiase wei kyɛn Onyankopͻn no na wͻnom wͻ wͻn gyidie nyinaa wͻ mu no na wͻnom nsɛm ɛka ewiase wei ho no bɛbo mu kɛseɛ ama no abubu nketenkete bebiree. Na Nyankopͻn Kɛseyͻ Wͻwͻ tumi nyinaa no bɛhyɛ wͻn akoma mu ma na gyidie dua no bɛso aba wͻ wͻn akoma mu. Ɛnam dua a ɛwͻ hͻ saa aberɛ yi, ɛnnyɛ ɛdua ampaara ampaara ɛfiri sɛ wͻka fa ɛdua pa no ho sɛ “Ana wonnhunu sɛdeɛ Allah de asɛm papa yɛ mfatoho.Ɛte sɛ dua papa ne nhini no tintim na ne mman duru ɛsoro.Ɛyi n’aduaba mmerɛ nyinaa ɛnam n’Awurade tumi nti.”.(14;25-26) Onyankopͻn akyerɛ edua a edi mu wͻ ha sɛ ɛyɛ gyidie mapa a ɛwͻ ɛntini a ɛyɛ den na ne man no nso duru ͻsoro ahenman mu a ɛso aba aberɛ biara wͻ n’Awurade no nhyɛ so ne nhini no atintim kyerɛ sɛ gyidie no nyinasoͻ bɛyɛ den ne nokorɛ na ɛduru gyidie mapa mpɛmpɛnsoͻ na ɛso aba aberɛ biara. Ɛnni kwan sɛ ɛyɛ sɛ adua a awoͻ dabiara da.Sɛ ɛteɛ biara, ka sɛ, ɛyɛ ne gyinabrɛ ne sie sie? Nkurͻfoͻ bebiree ka sɛ ɛdeɛn nti na ɛho hia ma gyidie? Kwasea bɛn na ɛka sɛ meyare nanso ɛho hia bɛn ɛhia sɛ mode yaresafoͻ ba? Nsunswansoͻ bɛn na saa yare yi de bɛba? Seisei, Muslimfoͻ agye Islam ato mu nanso wͻn nni gyinabrɛ a wͻwͻ gyidie mapa a ɛbɛba mu sɛ sunsum mu kanea no ne gyidie kͻ a.
Wͻ ne tiatia mu no, saa nsɛm wei nti na wͻsomaa me. Ɛnti mempepere woho sɛ wobɛka sɛ me yɛ ͻtorofoͻ. Ɛnti suro Nyame na srɛ bͻne fakyɛ ɛfiri sɛ anyansafoͻ no na ɛsrɛ bͻnefakyɛ. Saa yadeɛ wei ahyɛsodeɛ ɛyɛ hu paa na Onyankopͻn ayi akyerɛ me ɛfa ho sɛ Ampa ara sɛ, Allah nnsesa nnipa bi tebea kͻpem sɛ wͻbɛsesa deɛ ɛwͻ wͻn akomamu..(13;12) Wei ne Onyankopͻn Kokroko No asɛm na nome nka wͻn a wͻwͻ adwene bͻne na wͻpɛ sɛ wͻsɛe Onyankopͻn Kokroko No adepa. Onyankopͻn Kokroko No ka sɛ Nsesaeɛ bɛba N’apɛdeɛ mu sɛ nsesaeɛ ba akoma mu a.Ɛne sɛ suor Nyankopͻn na suro N’asotwe.
Obiara nni hͻ a ͻbɛgye ͻfoforͻ adesoa.Ebinom nntumi nni nokorɛ wͻ asɛndibea. Ɛneɛ ɛdeɛn na wobɛtumi ahwehwɛ no wͻ ewiase wei akyi a w’aka afa ho sɛ Saada no na onipa bɛdwane afiri ne nua ho..(80;35)(Nkyerɛaseɛ firi Malfuzat vol8 pp.261-262).
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no nso kaa sɛ: “Hwɛ saa ara na obi a ͻse ͻgye Onyankopͻn ne Ne Kͻmhyɛni ne nwoma no di nanso ͻnni ahyɛdeɛ no so, bi te sɛ asͻreyͻ, akͻmkyen amantuo kronkron (Hajj), ahiafoͻ ntoboa (Zakat), Nyamesuro (Taqwa) ne teneneeyͻ na ͻtwe ne ho firi ahyɛdeɛ a ɛfa ahoteɛ ho na ɛkyerɛ bͻne gyaeɛ ne deɛ ɛkeka ho, saa nnipa no nfata sɛ wͻfrɛ no Muslimni. Saa ara nso na obi a ͻnnye Bͻhyɛ Messiah (ANN) no nni anaa ͻnnim ne mu gyidie mfasoͻ no, saa nnipa nonnhunu Islam yie na ͻnnim nkͻmhyɛ botaeɛ.Yɛnntuminnfrɛ no Mulsimni mapa ne obi a ͻnngye Nyame ne Ne kͻmhyɛni nni. Sɛdeɛ Otumfoͻ Onyankopͻn nam Kͻmhyɛni Kronkron (NNN) no so ama ahyɛdeɛ wͻ Kur’aan Kronkron no mu no, saa ara nso na w’aka odiadeni (Khalifa) a ͻtwatoͻ no ho asɛm wͻ mu.Wͻafrɛ wͻn a wͻtia no no awudifoͻ. Nsonsonoeɛ a ɛda Kur’aan Kronkron ne Hadith mu nsɛm ntɛm (a ɛnyɛ nsonsoeɛ na emom Kur’aan no mu Nkyerɛmu) ara ne sɛ, Kur’aan Kronkron no bͻ din Khalifa na Hadith no nso bͻ din Bͻhyɛ Messiah. Muslimni papa ne obi a ͻnnye Nipa a Kur’aan Kronkron no ahyɛ ne ho nkͻm nni?(Nkyerɛaseɛ firi Malfuzat vol8 pp.261-262).
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no atwerɛ sɛ: Oh! Agyimifoͻ, deɛn namenfa ntoto moho! Mo gyinabrɛ tesɛ nkurͻfoͻ bi a wͻho kyere wͻn na nnipa papa bi adua nuaba ahodoͻ atwa wͻn fie ho ahyia na nsu-tene dɛɛdɛ retene fa aseɛ na ɛbͻ ban firi awia ho. Saa nnipa papa yi refrɛ wͻn a wͻrehye na wͻho rekyere wͻn no na wͻni ͻdwoͻ. Na nuaba ne nsuo biara nni hͻ a wͻbɛtumi adi anom.Nanso saa nkurͻfoͻ yi nnyɛ sutie mma nnipa papa yi. Wei nti na Nyankopͻn se wͻde dͻm foforͻ bi bɛba a wͻbɛgye ͻdoͻ wͻ saa nnua yi ase na wͻadidi anom nsutene no bi. Wͻama nfatoho wͻ Kur’aan Kronkron no mu sɛ, Dhui Qarnain hunu dͻm bi a na wͻrehye wͻ ͻhyew mu……. Na na saa ͻman yi mpɛ moa biara nfiri Dhui Qarnain hͻ, ne saa nti, wͻho kyeree wͻn. Dhui Qarnain hyiaa dͻm foforͻ a wͻnom srɛɛ ne nkyɛn moa wͻ wͻn atamfo so. Wͻsii ban maa wͻn na wͻnom nyaa banbͻ wͻ wͻnatamfo so.
Menam Kur’aan Kronkron no nkͻmhyɛ yi so ka wͻ nokorɛ mu sɛ, me ne Dhui Qarnain no a wͻhyiaa ͻman biara no. Na wͻn a wͻrehye wͻ ͻhyew mu no ne Muslimfoͻ a wͻnnye me nni no. Akristofoͻtesɛ nkurͻfoͻ a wͻte atɛkyɛ ne esum mu na wͻmpɛgya wͻn ani nhwɛ awia. Na me dͻm ne wͻn a wͻsii ban maa wͻn no.Wͻnom ne wͻn a wͻbɛnya banbͻ afiri wͻn atamfo nsam. Ampaara sɛ, saa kuo yi bɛtena ase afe bͻͻ na ͻbonsam ntumi nni so nkunim. Wͻnom nkyerɛkyerɛ bɛyɛ nam akyɛn nkrantɛ na wͻbɛkͻso adi nkunim wͻ ɛsom nkaeɛ nyinaa so kͻpem atemuda (Nkyerɛasewɛ a afiri Brahin e Ahmadiyya Part V, Ruhani Khaza’in Vol. 21, pp. 313 – 315).
Bͻhyɛ Messiah (ANN) no atwerɛ bio sɛ; Oh! Adasamma, mma mommu Nyankopͻn ne Ne nsɛnkyerɛne animtia na monsrɛ Ne kyɛn bͻnefakyɛ, na monyɛ ahobraseɛ ma No. mowerɛ afiri wͻn a wͻdii moanim kan no a wͻbͻͻ atorͻ no….. Sɛ mowͻ suro bi a momɛsrɛ Nyame Kɛseɛ No nkyɛn sumabrɛ. Monsͻre na mompam wͻn a wͻtiamo no, ana wͻamma mo agyinasoͻ no a wͻde maa atiafoͻ no a adi moanim kan no?ana wͻansane nsɛnkyerɛne amma monkyɛn? Nti Onyankopͻn maa Bosome kyee awia na Awia nso kyee bosome no wͻ Ramadhan Bosome mu kyerɛɛ mo….. Oh!Adasamma, me fir Otumfoͻ Onyankopͻn hͻ na aba mo hͻ. Obi wͻ momu a ͻsuro Onyankopͻn?Anaa mobɛwu wͻ nyeraeɛ mu?Mobͻ pͻ sɛ abͻfoͻ. Deɛn na monya firii mu ka gyidie hwereɛ ho? Muslimfoͻ mma, monsuro Nyankopͻn. Monhunu sɛdeɛ Onyankopͻn asi ahyɛ me nsɛm no ma na Wͻayɛ Bͻnefakyɛfoͻ ama me? Adeɛn nti na monyɛ aso mma Onyankopͻn nsɛnkyerɛne na motia me? Sɛ moyɛ ateneneefoͻ a, monsakra tesɛ nnipa a wͻagu n’anim ase na ͻsuro n’awieɛ. Nyankopͻn dͻ wͻn a wͻsakra (Nkyerɛasewɛ a afiri Hujjatullah, Ruhani Khaza’in Vol. 12, pp. 192 – 193).
Hadhrat Khalifatul Masih bͻͻ mpaeɛ sɛ, Onyame mue Muslimfoͻ akoma na wͻnte Onyankopͻn ahyɛdeɛ no ase na wͻnya ntwitwa gyeɛ nfiri ͻhaw a wͻrehunu wͻ saa merɛ yi mu no ho. Wͻnte Nyame abufuhyew ase na wͻnte wͻho nfiri awurukasɛm ho. Onyankopͻn moa yɛn na yɛnya Taqwa na yɛnni yɛn nsɛm so na yɛntwe wiase nfiri ͻsɛeɛ ho daa.
Bio, Hadhrat Khalifatul Masih de too dua sɛ, ͻbɛyͻ Janaza ama yɛnuanom mienu bi a Nyame atwe wͻn nkwa. Chuadhry Mahfooz ur Rahman sahib a ͻfirii mu wͻ Oforisuo bosome da a ɛtͻ so nsia. Ɔnyaa mfie aduͻkron miɛnsa.Ne ba panin ne yɛn sadr Ansurullah.Qaisera Begum sahiba nso firii mu wͻ Oforisuo bosome da a ɛtͻ so du-miɛnsa mu.Ɔnyaa nfie aduͻson. Na n’ase ne Khalifa a ͻtͻso mienu. Na ͻyɛ gyidini mapa nan a ͻdͻ Khilafat yie. Ɔboaa ahiafoͻ ne wͻn na wͻho kyere wͻn. Nyankopͻn nkrͻn wͻn gyinabrɛ ma yɛn.
Translated by: 1. Master Abdul Hakeem Oduro Sahib
(Final year student, Jamiatul Mubashireen, Ghana)
2. Master Ali Majeed Sahib
3. Master Ishaque Opoku Muhammad Sahib
(Second year student, Jamiatul Mubashireen, Ghana)